Thursday November 26, 2020 - 16:09:44 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warbaahinta ugu afka dheer dalka Mareykanka ayaa sheegtay in sarkaal sare oo katirsanaa hay'adda sirdoonka ee CIA-da lagu dilay weerar ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya.
Mas'uu sare oo katirsan dowladda Mareykanka ayaa xaqiijiyay in sarkaalka lagu dilay dalka Soomaaliya dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay balse wuxuu diiday in uu bixiyo faah faahin intaas ka badan.
Sarkaalka ayuu dhaawac daran kasoo gaaray weerar uga yimid dagaalyahannada Shabaabul Mujaahidiin balse markii dambe ayuu udhintay dhaawacii cuslaa ee soo gaaray.
Mas'uul American ah ayaa warbaahinta u sheegay in sarkaalkan ladilay uu muddo dheer kusoo jiray dagaallada ka dhanka ah mujaahidiinta islamarkaana loo sameyn doono tallo xusuus ah oo loo dhiso saraakiisha sarsare ee hay'adda CIA-da kuwaas oo ku dhinta dagaallada halista ah.
Wargeyska New York Times ayaa sheegay in sarkaalkan CIA-da katirsan uu horay uga tirsanaa hoggaanka ciidanka loo yaqaan Navy SEAL ee qeybta ka ah duullaanka saliibiga ah ee lagusoo qaaday dalka Soomaaliya iyo wadamo kale oo katirsan caalamka islaamka.
inkastoo aan wali la shaacin goobta sida rasmiga ah loogu dilay sarkaalka hadane waxaa loo badinayaa in lagu dilay wilaayada Sh/hoose isagoo qeyb ka ahaa weeraro habeen dheelmad ah oo ciidamada Mareykanka iyo maleeshiyaadka Bangaraafta ay kusoo qaadeen deegaanno lagu maamulo shareecada Islaamka.
Dilka sarkaalkan katirsan CIA-da ayaa imaanaya xilli Mareykanku uu ku dhawaaqay in boqolaal katirsan ciidamadiisa uu kala bixi doono dalka Soomaaliya bisha Janaayo ee sanadda 2021.